သင်၏ အီးမေးလ် စစ်မှန်ကြောင်း အထောက်အထားကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့ အတည်ပြုမည် (DKIM၊ DMARC၊ SPF) | Martech Zone
သင့်အီးမေးလ်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားကို မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ကြောင်း မည်သို့အတည်ပြုနည်း (DKIM၊ DMARC၊ SPF)
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 25, 2022 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ Douglas Karr
သင်သည် မည်သည့် ပမာဏ အမျိုးအစားတွင်မဆို အီးမေးလ် ပေးပို့ပါက၊ ၎င်းသည် သင့်တွင် အပြစ်ရှိသည်ဟု ယူဆရပြီး သင်၏ အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြရမည့် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ် ရွှေ့ပြောင်းမှု၊ IP ပူနွေးလာမှုနှင့် ပေးပို့နိုင်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများအတွက် ၎င်းတို့ကို ကူညီပေးသည့် ကုမ္ပဏီများစွာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအများစုက သူတို့မှာ ပြဿနာရှိမှန်းတောင် မသိကြဘူး။
ပို့ဆောင်နိုင်မှု၏ မမြင်နိုင်သော ပြဿနာများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသတိမထားမိသော အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်မှုတွင် မမြင်နိုင်သောပြဿနာသုံးမျိုးရှိသည်။
အခွင့် - အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (ESP) ရွေးချယ်ဝင်ရောက်ခွင့်များကို စီမံခန့်ခွဲပါ... သို့သော် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (ISP က) ဦးတည်ရာအီးမေးလ်လိပ်စာအတွက် တံခါးပေါက်ကို စီမံခန့်ခွဲသည်။ တကယ့်ကို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ ခွင့်ပြုချက်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာများရယူရန် လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် သင်သည် အရာအားလုံးကို မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ISP သည် သင့်အား မည်သို့ပင်ပိတ်ဆို့စေမည်ကို မသိပါ။
Inbox နေရာချထားမှု - ESP များသည် မြင့်မားမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပို့ဆောင်ရေး အခြေခံအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိသော နှုန်းထားများ။ သင့်အီးမေးလ်စာရင်းသွင်းသူမှ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသော အမှိုက်ဖိုင်တွဲသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့သော အီးမေးလ်ကို နည်းပညာဖြင့် ပေးပို့ပါသည်။ အမှန်တကယ် စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် Inbox နေရာချထားမှုမျိုးစေ့စာရင်းကို အသုံးပြုပြီး ISP တစ်ခုစီကို သွားကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်။
ဂုဏ်သရေ - ISP များနှင့် Third-party ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်အီးမေးလ်အတွက် ပေးပို့သည့် IP လိပ်စာအတွက် ဂုဏ်သတင်းရမှတ်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင့်အီးမေးလ်အားလုံးကို လုံးလုံးပိတ်ဆို့ရန် ISP များက အသုံးပြုနိုင်သည့် အမည်ပျက်စာရင်းများ ရှိသည် သို့မဟုတ် သင့်တွင် အမှိုက်ဖိုဒါသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမည့် နာမည်ပျက်များ ရှိနေနိုင်သည်။ သင်၏ IP ဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ကြည့်ရန် သင်သုံးနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများစွာ ရှိပါသည်။ သို့သော် များစွာသော ISPs algorithms များကို အမှန်တကယ် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ကျွန်ုပ် အနည်းငယ် အဆိုးမြင်နေပါသည်။
ဝင်စာပုံးနေရာချထားခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှာ ISP များသည် သင်ရှာဖွေရန် အသုံးပြုနိုင်သော DNS မှတ်တမ်းများကို သင်သတ်မှတ်ထားပြီး သင်ပေးပို့နေသည့် အီးမေးလ်များကို သင့်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဟန်ဆောင်သူမှမဟုတ်ဘဲ သင့်ထံ အမှန်တကယ် ပေးပို့ထားကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ . ၎င်းကို စံနှုန်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်-
ပေးပို့သူမူဝါဒမူဘောင် (SPF) – အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ရှေးအကျဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်၊ ဤနေရာတွင် သင်သည် သင်၏ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် TXT မှတ်တမ်းကို မှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ (DNS ကို) သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် သင်အီးမေးလ်ပို့နေသည့် မည်သည့်ဒိုမိန်းများ သို့မဟုတ် IP လိပ်စာများကို ဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် အီးမေးလ်ကို ပေးပို့သည်။ Martech Zone မှ Google အလုပ်ခွင် နှင့်ထံမှ ဆပ် (လက်ရှိ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် ESP သည် beta တွင် ရှိနေသည်)။ ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် Google မှတဆင့်ပေးပို့ရန် SMTP ပလပ်အင်တစ်ခုရှိပါသည်၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းတွင်ပါရှိသော IP လိပ်စာတစ်ခုလည်း ရှိပါမည်။
ဒိုမိန်း-based Message Authentication၊ Reporting နှင့် Conformance (DMARC) – ဤစံနှုန်းအသစ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းနှင့် ပေးပို့သူနှစ်ဦးစလုံးကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သည့် ၎င်းတွင် ကုဒ်ဝှက်ထားသောသော့တစ်ခု ပါရှိသည်။ သော့တစ်ခုစီကို ကျွန်ုပ်၏ပေးပို့သူမှထုတ်လုပ်ပြီး spammer မှပေးပို့သောအီးမေးလ်များကို အယောင်ဆောင်၍မရကြောင်းသေချာစေပါသည်။ Google Workspace သုံးနေတယ်ဆိုရင် ဒီမှာ DMARC ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ။.
DomainKeys Identified Mail (DKIM) – DMARC မှတ်တမ်းနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ဤမှတ်တမ်းသည် ကျွန်ုပ်၏ DMARC နှင့် SPF စည်းမျဉ်းများကို မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံရမည်ကို ISP များအား အသိပေးသည့်အပြင် ပေးပို့နိုင်မှု အစီရင်ခံစာများကို မည်သည့်နေရာတွင် ပေးပို့ရမည်ကို အကြောင်းကြားပါသည်။ ISP များသည် DKIM သို့မဟုတ် SPF ကိုမကျော်လွန်သော မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဆို ငြင်းပယ်စေလိုပြီး ၎င်းတို့အား ထိုအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ အစီရင်ခံစာများပေးပို့စေလိုပါသည်။
Message Identification အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ညွှန်ကိန်းများ (BIMI) - နောက်ဆုံးပေါ်ထပ်တိုးမှုမှာ BIMI သည် ISP များနှင့် ၎င်းတို့၏အီးမေးလ်အပလီကေးရှင်းများအတွက် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်အတွင်း အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြသရန် နည်းလမ်းတစ်ခုပေးပါသည်။ Open Standard ရော နှစ်ခုလုံးရှိတယ်။ Gmail အတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော စံနှုန်း ကုဒ်ဝှက်ထားသော လက်မှတ်တစ်ခုလည်း လိုအပ်ပါသည်။ Certificate တွေက အရမ်းဈေးကြီးလို့ အခုမှ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။
မှတ်ချက်- သင်၏ အီးမေးလ် စစ်မှန်ကြောင်း အထောက်အထား တစ်ခုခုကို စနစ်ထည့်သွင်းရန် အကူအညီ လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီထံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ဆိုင်းမနေပါနှင့်။ Highbridge. ကျွန်တော်တို့မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပေးပို့နိုင်မှုကျွမ်းကျင်သူများ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အီးမေးလ်တိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်၊ ထပ်ဆင့်အချက်အလက်နှင့် တရားဝင်အချက်အလက်အားလုံးကို မက်ဆေ့ခ်ျခေါင်းစီးများအတွင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါက၊ ဤအရာများကို ဘာသာပြန်ဆိုရန် အလွန်လွယ်ကူသည်... သို့သော် သင်သည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူဖြစ်ပါက ၎င်းတို့သည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက် မက်ဆေ့ခ်ျခေါင်းစီးပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုအီးမေးလ်များနှင့် ကမ်ပိန်းအချက်အလက်အချို့ကို မီးခိုးရောင်ပြထားပါသည်။
သင်ဖတ်ကြည့်လျှင် ကျွန်ုပ်၏ DKIM စည်းမျဥ်းများသည် DMARC ဖြတ်သန်းခြင်း (မရှိပါက) နှင့် SPF လွန်သည်ဖြစ်စေ သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်... သို့သော် ၎င်းသည် အလုပ်များပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိသော်လည်း ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ DKIMValidator. DKIMValidator သည် သင့်အား သတင်းလွှာစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ရုံးအီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့နိုင်သည့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို သင့်အား ပေးဆောင်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် ခေါင်းစီးအချက်အလက်များကို ကောင်းမွန်သောအစီရင်ခံစာအဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးသည်-
ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ DMARC ကုဒ်ဝှက်ခြင်းနှင့် DKIM လက်မှတ်ကို ဖြတ်သွားခြင်း ရှိ၊
ထို့နောက်၊ ၎င်းသည် ကျော်သွားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကြည့်ရန် ကျွန်ုပ်၏ SPF မှတ်တမ်းကို ရှာကြည့်သည် (၎င်းသည်)။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား မက်ဆေ့ချ်ကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေကာ အကြောင်းအရာသည် အချို့သော SPAM ထောက်လှမ်းခြင်းကိရိယာများကို အလံပြခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ ကျွန်ုပ်သည် အမည်ပျက်စာရင်းတွင် ပါဝင်နေခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး အမှိုက်ဖိုဒါသို့ ပေးပို့ရန် အကြံပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပြောပြသည်-
သင်၏ အီးမေးလ် စစ်မှန်ကြောင်း မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေရန် သင့်ကုမ္ပဏီမှ အီးမေးလ် ပေးပို့နေသည့် ESP သို့မဟုတ် ပြင်ပမှ စာတိုပေးပို့ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းကို စစ်ဆေးရန် သေချာပါစေ။
DKIM Validator ဖြင့် သင့်အီးမေးလ်ကို စမ်းသပ်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါငါ့အ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် Google အလုပ်ခွင် ဤဆောင်းပါးတွင်ပါ။
Tags: Message Identification အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ညွှန်ကိန်းများပို့ဆောင်ရေးdkimdkim လက်မှတ်dkim validatorDMARCDNSဒိုမိန်းအခြေပြု Message AuthenticationDomainKeys Identified Mailအီးမေးလ်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းdkim ကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ။dmarc ကို ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ။အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။ပေးပို့သူမူဝါဒမူဘောင်spf